Magaalada Paris oo ku guuleysatay marti gelinta ciyaaraha Olombikada adduunka 2024
Thursday September 14, 2017 - 10:22:01 in Wararka Dibadda by Nocsom Editor
Magaalada Paris ayaa waxaa loo doortay in ay martigeliso tartanka Olympic-da Adduunka ee sanadka 2024, ka gadaal markii ay ku guuleysatay in la siiyo fursadda martigelinta tartankaas.
Los Angeles ayaa dhankeeda loo magacaabay in ay tartanka qabato 4 sano keddib waqtigaas, waxayna martigelin doontaa 2028-ka sida uu Guddiga Caalamiga ah ee Olympic-ka International Olympic Committee xushmad ahaan ugu muujiyay LA.
Labada magaalo ayaa aad isugu garbinayay martigelinta ciyaaraha 2024, ka hor inta aysan LA Aqbalin in ay iska sugato 4 sano oo dheeri ah keddib markii IOC ay u ballan qaadday in ay siin doonto tartanka xiga.
Ciyaaraha Paris Games, waxay fashilmeen sanadihii 2008 iyo 2012, waxayna u noqon doontaa 100-sano keddib in ay caasimadda Faransiisku martigeliso ciyaarahan.
Los Angeles ayaa qabatay laba mar oo kala ahaa 1932 iyo 1984.
Paris iyo Los Angeles ayaa ahaa kaliya labada musharrax ee u taagan sanadka 2024-ka keddib markii Hamburg, Rome iyo Budapest ay tartanka ka baxeen.
Guddiga IOC ayaana u codeeyay June cidda qabaneysa ciyaarahaas 2028 si la mid ah waqtiga ay dhacayaan ee 2024-ka.
Magaalada reer California waxay dooneysay qabashada ciyaarahan, maaddaama ay u diyaarsaneyd Paris ayaase sheegtay in ay tahay mid wax walba u dhammeystiranyihiin si ay u qabato ciyaaraha 2024-ka.
IOC madaxweynaheeda Thomas Bach ayaa yiri codadka labada magaalaba waxay ahaayeen "Kuwo la isku raacay”.